'Ukufa okushiyekileyo' kukukrobisa kwikamva leMidlalo yeVidiyo - Iimidlalo Yevidiyo
Ukusebenza kukaMadks Mikkelsen kwi-'Kufa kwe-Stranding 'kukukrobisa kwikamva leMidlalo yeVidiyo
Isincoko esilandelayo siqulathe enkulu, isiphelo sehlabathi sabaphangi ye Ukufa kuXakekile .
Andinguye umdlali omkhulu, umdlali weDenmark uMad Mikkelsen utshilo kudliwanondlebe lwakutsha nje no GQ . Into yokugqibela endiyenzileyo yile I-Pac-Man , kodwa yile minyaka imbalwa idlulileyo. UMikkelsen ubonakale kwiimuvi ezinje Ikhasino yaseRoyal , Ugqirha Strange , kwaye I-Rogue One: Ibali leMfazwe yeNkwenkwezi , kwaye wadlala uGqirha Hannibal Lecter kuthotho lwe-NBC UHannibal. Ukumangaliswa kwakhe, ukujika kwakhe kwenkwenkwezi yakutshanje kuza kwindima ephambili Ukufa kuXakekile , umdlalo wevidiyo we-adventure evulekileyo kwihlabathi liphela eneenkwenkwezi zabadlali abaziwayo kwimidlalo yokubamba eshukumayo. Kukukhutshwa kwamva nje kuHideo Kojima, umyili waseJapan odale Isinyithi seGear Metal uthotho . Unyana wam ungumdlali omkhulu weqonga, wathi akuva ukuba ndinentlanganiso noHideo, wayefana, Daaaaaaaad! Kwakufana neyona nto ipholileyo awakhe weva, utshilo uMikkelsen. Ungaze ukhathalele zonke iifilimu endizenzileyo endicinga ukuba uzakufumana zipholile. Oku yayiyeyona nto ipholileyo.
Kwiminyaka emithathu ngaphambi kokukhululwa komdlalo ngo-Novemba, uKojima hyped Ukufa kuXakekile ngamandla emidlalo eneenyembezi evela kubadlali abaphezulu awabaphosa. UKojima wayebonakala esenza imovie endaweni yomdlalo wevidiyo. Ukujonga kuqala kwangoko kutyhile iziqwengana ezivela kwi-cinematic cutscenes: UNorman Reedus uzala usana ngelixa elila elunxwemeni lwesanti engwevu, uMikkelsen ubhijela into emnyama ebonakalayo, uGuillermo del Toro ujikeleza ngemijelo yokuhambisa amanzi amdaka edolophini engqingiweyo. Kodwa umdlalo weqonga uhlala uyimfihlakalo, ke abagxeki bomdlalo wevidiyo bazibuza ukuba ingaba Ukufa kuXakekile ingaze ibekho njengayo nayiphi na into engaphaya kothotho lwezinto ezisikiweyo ezenziwe ngeprojekthi engaqhelekanga, engazalisekanga. Olu loyiko lukhumbula ukurhoxiswa komdlalo weqonga owoyikisayo kaKojima Cwaka Iinduli ngumshicileli wakhe, uKonami, kwi2015, ngaphandle kokukhutshwa kwedemo kowe-2014 kumdlalo obizwa ngokuba ngumdlalo PT . (Umdlalo wokudlala odlalayo), owawukhokelwa nguKojima kunye no-del Toro, ekwabonisa uReedus. U-Kojima waphinda wavula isitudiyo sakhe ngokuzimeleyo emva kokushiya iKonami ngo-2015 Kwaye saphinda sadibana no-del Toro noReedus Ukufa kuXakekile .
Ukujonga kuqala Ukufa kuXakekile Ukuvalela ukuthanda kukaKojima eHollywood nokwenza ifilimu. Kwixesha elizayo, uKojima uxelelwe i-BBC kuxwebhu malunga Ukufa kuXakekile , IiKojima Productions nazo ziya kuqala ukwenza iifilimu. Yisithembiso esilayishiwe sabagxeki bomdlalo wevidiyo kunye nabathandi bokubonisa: Kule minyaka ingamashumi idlulileyo, imidlalo yevidiyo ibijonge ukuzenzisa kwefilimu, ngelixa iHollywood iye, ngokuchaseneyo, yamkela imidlalo yevidiyo kwiifilimu nge ukungabikho malunga nokudelela. UKojima ayinguye umlawuli wokuqala wevidiyo ukusasaza iinkqubela phambili kumdlalo bhanyabhanya nakwiinkqubo zeTV njengabalinganiswa abakhokelayo, kwaye ayinguye yedwa umlawuli wevidiyo yomdlalo onqwenela ukugqwesa kwe-cinema. Kodwa ezi ayizizo iimovie ezinamaqhosha eqhosha. Imidlalo kaKojima, ikakhulu, imidlalo, badume ngeenkqubo zabo zonxibelelwano njengoko zinjalo ngolwalathiso lwabo lobukrelekrele . U-Kojima usebenzisa izinto ze-cinematic ukwenza ilizwe elinomdla lokuba abalinganiswa bakhe bahlale, kodwa akaze enze iimpazamo kubaphulaphuli bakhe: Imidlalo yakhe yenzelwe umdlali, hayi a umbukeli . U-Kojima akafuni ukwenza i-cinema kakhulu njengoko efuna ukudibanisa ubugcisa ngokunzulu kuninzi lwee-mediums: iimuvi, iinkqubo zeTV, iinoveli, imbali, idrama, umdlalo ohlekisayo kunye nemidlalo yevidiyo yonke incoko kunye.
Kwi Ukufa kuXakekile , UReedus udlala umlinganiswa ophambili, uSam Porter Bridges, umntu ohambisa iimpahla othutha imithwalo exabisekileyo-kubandakanya usana-ngaphesheya kwe-United States, neyabona abantu bayo behla kwaye urhulumente wayo ehlaselwa yintlekele eqhubekayo ebizwa ngokuba yi-Death Stranding. USam usebenzela umbutho ofihlakeleyo osekwe ngunina, uBridget Strand, othumela uSam kuhambo olusentshona kunye nosana, owaziwa kumdlalo njengeBB, ukuze afumane abasindileyo phakathi kwemimandla ewayo, engazidibanisiyo kwaye aphinde abenze njengesizwe esinekratshi: Dibanisa abantu, njengoko abalinganiswa bomdlalo besitsho, kwaye benze iMelika iphelele kwakhona. Kodwa ilizwekazi lithwaxwa ziimfama ezoyikekayo, ezaziwa ngokuba zii-BTs (izinto ezinamabhantshi), ezixhaphaza abantu abasindayo njengokuba uluntu luye lwancipha. Ukufa kuXakekile Ifuna ukuba umdlali akhokele uSam xa enyuka, enyuka, ekhonkotha, ebaleka, kwaye esiba ziikhilomitha ezingama-3 000 kumanxuwa amabi aseMelika. USam usebenzisa imipu kunye neziqhushumbisi ukulwa ne-BTs, kodwa umdlalo ngaphandle koko uyamdimaza umdlali ekusebenziseni amandla abulalayo ukoyisa abaphikisi abaphilayo, njengamaphanga uSam adibana nawo kuhambo lwakhe. Iingxabano ezininzi ziye zanyuka ngokubaleka. Ngale ndlela, uKojima wahlula uSam kweyona protagonist yakhe idumileyo, Inyoka eqinileyo, ijoni elibi, elibulalayo Isinyithi seGear Metal imidlalo.
UMikkelsen udlala uClifford Unger, aka Combat Veteran, umphathi wempi wase-US onempindezelo-kunye nesibhengezo-esihlasela uSam. I-Unger yi-archetypal Kojima villain: i-mercenary ekhulayo enegunya elingaphaya kwendalo kwaye, ngokomlinganiso olungileyo, umpu wokubetha. Ukholelwa ukuba u-BB ngumntwana wakhe olahlekileyo kudala wabanjwa ngu Sam. Emdlalweni, umdlali uphathwa ngokukhawuleza kwe-Unger egumbini lesibhedlele, ephelisa umntwana wakhe ozelwe ngaphambi kwexesha kunye nenkosikazi yakhe, bobabini ababegcinwe ngumbutho ofihlakeleyo obizwa ngokuba ziiBridges-okhokelwa ngumama kaSam -kwenziwa ulingo olunamandla . Ekugqibeleni, u-Unger uzama ukubaleka esibhedlele nomntwana wakhe kuphela ukuba adutyulwe abulawe ngoonogada. Ukusuka phesheya kwengcwaba, u-Unger uyasokola ukubuyisa usana lwakhe kwiibhulorho. Uhambisa uSam no-BB kuthotho lweenkundla zomkhosi zenkulungwane yama-20: imisele yaseNtshona Front kwiMfazwe yeHlabathi yokuQala, isixeko esiqhushumbe kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, ihlathi elinengxwabangxwaba kwimfazwe yaseVietnam. Kula mabala edabi, u-Unger utyhola amajoni akhe nxamnye noSam, kwaye ke umdlali kufuneka azingele abulale u-Unger ephindaphinda ngelixa efumanisa iinjongo zakhe ezibi.
Nangona umdlali efumana umdlalo ngakwimbono kaSam, i-Unger yeyona nto ibalaseleyo Ukufa kuXakekile Ukutshintsha phakathi komdlalo wokudlala kunye nesinema. USam, umthumeli othobekileyo, unamagingxigingxi kwaye uyathandeka, kodwa uphantsi; I-Unger luphawu oluphawuleka ngakumbi, kwaye uMikkelsen uhambisa owona mdlalo uphakame kakhulu. I-Unger kunye namajoni akhe angumoya angena kwibala ngalinye lomlo ngokusebenzisa intshayelelo ekhethiweyo, efana ne-drill yempi njengokuba ifana neendlela zokudanisa. Unger akathethi ngeli xesha lokulandelelana, nangona esenza ngokuqinisekileyo. Uyancuma, ukhala iinyembezi ezimnyama ezinki, ubiza umdiza ovela emoyeni, kwaye ubiza umpu wakhe-uyamosha umlo wokubuyisa i-BB eBridges. Andinguye umntu okhohlakeleyo kulo mdlalo, uxelele uMikkelsen GQ . Ndihlala ndizama ukwenza amaqhawe am amaqhawe, ukuzama ukubona umhlaba ngokwembono yakhe. Oko kubalulekile, ukuba umthethelele ngandlela thile, okanye ubuncinci umenzele umntu kwinqanaba lokuba ukwazi ukuqonda ukuba zeziphi iinjongo zakhe.
Kwimisiko yakhe yokusika, izando zikaMikkelsen zigoduka zibetha zodwa ebalini lika-Unger. Kodwa uMikkelsen kufuneka athengise indima ka-Unger njengomchasi osebenzayo kuSam. I-Unger ngumphathi wevidiyo yomdlalo weqonga, eneendawo zokubetha, iziphumo zomonakalo, kunye neepatheni ezicwangcisiweyo zokuhlaselwa nokuzikhusela. Abaphathi abathathu baka-Sam balwa no-Unger ngovavanyo-lovavanyo inkqubo yomdlalo, eyilelwe ukudimaza amandla abulalayo ngokuchasene uninzi lwabachasi babantu, nangona u-Unger kunye namajoni akhe omoya ngamanye amaxesha anika umdlali ithuba lokukhetha. Kwimingxunya yaseNtshona Front, uSam kufuneka ajongane ngokuphindaphindiweyo neUger kwiindawo ezikufutshane kunye neepaseji ezimxinwa kunye nemithwalo emiselweyo ethintela umbono womdlali. Kwidabi leMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, u-Unger kunye namajoni akhe asasazekileyo asasazeka kwisikwere sedolophu, ethatha iifoto ku-Sam kwiifestile nakwiingqameko njengoko umdlali wayezingela i-Unger. E-Vietnam, u-Unger uthumela amajoni akhe angama-ghost ngokumangalisa ngokumangalisayo: Amajoni asisiporho abeka imigibe ye-booby kwingca ende kwaye agubungela uSam macala onke. I-Unger beckons: Sifuna ukuqiniswa! Tango, tango! Ndibuyisele iBB yam! Apha, uMikkelsen uphakamisa indibano emangazayo eqhelekileyo kubadubuli: umlinganiswa ekhwaza kwiluphu ukuze anike amandla umdlali ekulweni. Ukujongana kathathu kuka-Sam no-Unger icebisa kunxibelelwano olunzulu phakathi kwala madoda mabini. Emva kokuphumelela umchasi wakhe ongaqondakaliyo, uSam umi phezu kwe-Unger, obambe i-BB, ekhwele esifubeni sika-Sam, ezisa la madoda mabini kwindawo engaqhelekanga, eyokulwa njengoko i-Unger's dreamcape iwa kanye.
Ngamandla amakhulu okusebenza kwakhe, uMikkelsen ubhengeza le cosmology yomdlalo ochanekileyo, umdlalo weqonga otyhafisa intliziyo malunga nabazali, abantwana, ubomi, ukufa, ukuzisola nokuzalwa ngokutsha. UMikkelsen uyawa umgama phakathi kwendlela yokudlala yomdlalo kunye nemovie yesimo somlinganiswa onegalelo kwilizwe elibanzi nelinzima. Ukufa kuXakekile Ngaba, nangona kunjalo, uqukumbela malunga nemizuzu engama-90 kwii-cutscenes, enegalelo elincinci lomdlali, ukusombulula yonke idrama malunga noSam, Unger, BB, kunye neBridges. Ekugqibeleni, i-Unger isuka kwimida yebali iye kwintliziyo yayo enkulu, edibeneyo. Uqala njengoyise ongaqondakaliyo owathi wazisa, mgama, ngokudlula kwezinto emva kwexesha, kwaye watyhilwa njengomfeli-nkolo oneenkolelo zikayise ezidibanisa le melodrama ingavulekiyo malunga nemfazwe, ukuthanda izwe, iziporho, uqoqosho lwe-gig, imidiya yoluntu, unxibelelwano lomntu, kunye nokuphela.
Iyure zokugqibela zika Ukufa kuXakekile ndiye ndazibuza ukuba umsitho wamabhaso okanye umnyhadala wefilimu unokuziphendulela njani kwimidlalo ekukhutshweni kwe PlayStation 4. Amabhaso eMidlalo, acwangciselwe umhla we-12 kuDisemba, atyumba uReedus noMikkelsen weNtsebenzo eGqwesileyo, kwaye bonyulwe Ukufa kuXakekile yoMdlalo woNyaka, nangona kungekho ngaphandle impikiswano okoko uKojima waphosa umhlobo wakhe uGeoff Keighley-umgcini kunye nomvelisi weeMbasa zeMidlalo-njengomlingiswa omncinci kumdlalo. UKeighley uyaphika nakuphi na ukungqubana komdla. Uthi wayengenanto anokuyithetha kulonyulo lomdlalo. Ukufa kuXakekile Ixhokonxe impikiswano efanayo eJapan, apho abagxeki baqaphela ukubonakala okuvela kuHirokazu Hamamura, isigqeba solawulo e-Enterbrain, esingumnini womshicileli wemagazini yemidlalo yevidiyo eyaziwayo, iFamitsu, eyayisenziwa nguHamamura ukuhlela. Intsapho wanika Ukufa kuXakekile amanqaku afanelekileyo kuphononongo lwayo. Iindima zikaKeighly kunye noHamura njengabadlali abancinci bakhumbula amaxhala angaphambili malunga noKojima ukuphuhlisa umdlalo njengesizathu sokuphosa kunye nokunyuka kwabantu. U-Kojima, ngokuqinisekileyo, uye eHollywood kwimpazamo. Kodwa ukwenzile umdlalo oqaqambileyo malunga nabalinganiswa kunye neendawo ezikhathazwe kukwahlukana. Andizukukhusela ukhetho lokubandakanya uKeighly noHamamura, kodwa ekugqibeleni, ukusebenza kukaMikkelsen kunye noReedus kuvusa uninzi lwezi ngxaki. Ndiyasiqonda isizathu sokuba uKojima aqeshe umfelandawonye odumileyo, obanzi kwindibano yakhe yokwandisa. Kungenzeka ukuba ulahla uKeighley ngesizathu esifanayo esenza uMikkelsen. Kwindawo ebalulekileyo phakathi kweendlela zobugcisa, uKojima udibanisa abantu.
ezona bhanyabhanya zimbi
ngubani oyena mdlali webhola yomnyazi
tom hanks ipiyano enkulu
Iingoma ezilungileyo zokwahlukana kwabafana
Isivumelwano seentsuku ezili-10 nba
Lil yachty mario 64